एउटै किटले ५ जना सम्मको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने
२०७७ बैशाख २५ बिहीबार २०:१४:०० प्रकाशित
पिसिआर किटको अभाव भइरहेको समयमा परीक्षको दायरा बढाउने विकल्प छैन त?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. रञ्जित शाह भन्छन्, ‘अवश्य छ।’
उनका अनुसार पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने त्यो विकल्प हो – ‘पुलिङ टेष्ट।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुलिङ टेष्टलाई औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार स्वीकृति दिएका कारण अब पुलिङ टेस्टको काम हुने प्रयोगशालाले जनाएको छ। मन्त्रालयले पाँच जनासम्मको नमूना मिसाएर परीक्षण गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिएको हो।
पुलिङ टेष्टको माध्यमबाट एकै पटक थोरै किटले धेरैको कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ। यही विकल्प माथि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोली काम गर्दैछ। एउटै किटबाट पनि ५ देखि १० जनाको एकै पटक कोरोना परीक्षण गर्न सकिने डा शाह बताउँछन्।
पुलिङ टेष्टमा कुनै शंकास्पद पाँच जना व्यक्तिको नमूना संकलन गरिन्छ। संकलन गरिएका पाँचै जनाको नमूना एउटै ट्युबमा राखेर मिसाइन्छ। जसमध्ये एक जनाबाट १४० माइक्रो लिटर नमूना निकालेर त्यसलाई एउटै नमूनाको रुपमा कोरोना परीक्षण गरिन्छ। एक जनाबाट १४० माइक्रो लिटरका आधारमा पाँच जनाको ७ सय माइक्रो लिटर हुन्छ र त्यसलाई परीक्षण गरिन्छ।
उक्त नमूनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पाँचै जनाको नमूना पुनः परीक्षण गर्नु पर्दैन। यो हिसाबले बाँकी चार वटा किट बचत गर्न सकिन्छ। तर नमूना पोजेटिभ आए पाँच जना सबैको छुट्टा छुट्टै पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
डा शाहले भने, ‘हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको देशको लागि पुलिङ टेष्ट सबैभन्दा राम्रा विकल्प हो। हामी अब यही अनुसार काम गर्दैछौं।’
संक्रमित दर कम भएको देश र ठाउँमा पुलिङ टेष्ट उपयोगी हुने उनले बताए। उनका अनुसार पुलिङ टेष्ट जर्मनी जस्ता विकसित राष्ट्रमा पनि प्रयोग गरिएको छ।
३. आरडिटीमा कोरोना पोजिटिभ आएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिबाट स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण